Somaliand oo aqoonsi ku raadineeyso Maandooriyaha Qaadka
Guddoomiyaha Gobolka Meru oo ah gobolka uu kasoo boxo qaadka Soomaalidu u taqaan Miiroowga Peter Munya ayaa dawladda Kenya ka codsaday in ay laba jibbaarto in Somaliland lagu qanciyo inay iibsato isla markaana fududayso qaadka loo yaqaan Miiroowga in laga isticmaalo si sahlana usoo galo Somaliland.
Munya ayaa sheegay ujeedka uu u booqday Hargaysa ay ahayd inuu dawladda Somaliland kasoo dhaadhiciyo in meesha laga saaro caqabadaha keenay in Qaadka Miiroowga uu ka gadmi waayo Somaliland.
Wuxuu intaa ku daray Munya in lacag gaaraysa 400 oo malyan oo dollar ay Somaliland sanadkiiba uga baxdo qaadka uga yimaadda dalka Itoobiya. Wuxuu kaloo sheegay in Qaadka Miiroowga aad looga jecel yahay Somaliland balse lacagta uu kusoo galo ay wax badan ka jaban tahay qaadka ka yimaada Itoobiya, taasoo Miiroowga ku kalliftay inuu la tar tami waayo qaadka Itoobiya.
Sida uu soo jeediyay Guddoomiyaha gobolka Meru ee Kenya waa in la magacaabaa guddi farsamo oo dib u eega arinta canshuuraha qaadka , Somaliland-na lala xaajoodaa oo lasiiyaa nooc aqoonsi ah, oo ay dawladda Kenya aqoonsato Somaliland
Wuxuu intaa ku daray inuu soo jeedin doono warbixin, isla markaana uu mesha wax marayaan uga warami doono wasaaradda arimaha dibadda, dhawaanna booqan doono Somaliland.
Beeralayda Miiroowga ee Kenya ayaa khasare wayn soo wajahday markii qaadka laga joojiyay UK, 2014, waxaase taas usii raacay hoos u dhac ku yimid suuqii Soomaaliya.
Arintan waxay timid markii Xasan Sheekh soo jeediyay in qaadka gabi ahaanba laga mamnuuci doono Soomaaliya maadaama uu dhibaato xooggan u gaystay qaranka.
Current time: 01-22-2019, 11:15 PM Powered By MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.